Iindaba-Ukusetyenziswa kweNitrojeni yoLwakazi-Ubushushu obuphezulu beSuperconducting uLoliwe weMaglev onesantya esiphezulu
Ngentsasa ye-13 kaJanuwari, ngo-2021, iprototype yokuqala yobunjineli be-maglev yesantya esiphezulu kunye nomgca wokuvavanya usebenzisa itekhnoloji yokuqala yeYunivesithi yaseJiaotong yaseMazantsi-ntshona yaphehlelelwa ngokusemthethweni eChengdu, kwiPhondo laseSichuan, eTshayina. Iphawula impumelelo ukusuka ekuqaleni kuphando lweprojekthi ye-high speed superconducting ye-high speed maglev e-China kwaye ilizwe lethu linemiqathango yovavanyo lobunjineli kunye nemiboniso.
Ityala lokuqala emhlabeni; Yenza umzekelo
Ukugunyaziswa komgangatho wobushushu obuphezulu be-superconducting umgca wovavanyo we-magnetic levitation yeyokuqala emhlabeni. Ingummeli wemveliso ekrelekrele yaseTshayina kwaye yenza umzekelo kwintsimi yobushushu obuphezulu be-superconductivity.
Itekhnoloji ye-high-temperature superconducting maglev kaloliwe ineenzuzo zokungabikho kozinzo, isakhiwo esilula, ukonga amandla, akukho khemikhali kunye nongcoliseko lwengxolo, ukhuseleko kunye nentuthuzelo, kunye neendleko zokusebenza eziphantsi. Luhlobo olutsha olufanelekileyo lothutho lukaloliwe, olufanelekileyo imimandla eyahlukeneyo yesantya, ngokukodwa ifanelekile ekusebenzeni kwemigca yesantya esiphezulu kunye ne-ultra-high-speed; Ubuchwephesha bubuchwephesha obuphezulu bobushushu obuphezulu be-maglev kaloliwe onokuzimisa, ukuzikhokela, kunye neempawu zokuzinzisa. Yindlela entsha yothutho lukaloliwe olusemgangathweni olujongene nophuhliso lwexesha elizayo kunye nezicelo ezibanzi ezilindelekileyo.Ubuchwephesha buqala ukwenziwa ngobunjineli kwindawo ye-atmospheric, kunye nexabiso elilindelekileyo elijoliswe kwisantya sokusebenza likhulu kune-600 km / h, ekulindeleke ukuba idale entsha. irekhodi yesantya sezithuthi zomhlaba kwindawo ye-atmospheri.
Inyathelo elilandelayo kukudibanisa itekhnoloji yombhobho wevacuum yexesha elizayo ukuphuhlisa inkqubo yothutho ebanzi evala izikhewu kuthutho lwasemhlabeni kunye nezantya zothutho lomoya, nto leyo eya kubeka isiseko sempumelelo yexesha elide kwizantya ezingaphezu kwe-1000 km/h, ngaloo ndlela isakha imodeli entsha yezothutho zomhlaba. Utshintsho olujonge phambili noluphazamisayo kuphuhliso lomzila kaloliwe.
△ Unikezelo Lwexesha elizayo △
Itekhnoloji ye-Magnetic Levitation
Okwangoku, kukho iitekhnoloji ezintathu ze "super magnetic levitation" kwihlabathi.
Itekhnoloji ye-electromagnetic levitation eJamani:
Umgaqo we-electromagnetic usetyenziselwa ukuqonda i-levitation phakathi kukaloliwe kunye nomzila. Ngoku, uloliwe we<em>maglev waseShanghai, uloliwe we<em>maglev osakhiwa eChangsha naseBeijing zonke zikulo loliwe.
Itekhnoloji yaseJapan yobushushu obuphantsi be-superconducting magnetic levitation:
Sebenzisa iipropathi ze-superconducting zezixhobo ezithile kwiqondo lokushisa eliphantsi (elipholile ukuya kwi -269 ° C kunye ne-helium engamanzi) ukwenza isitimela sibe nevitate, njengomgca we-Shinkansen maglev eJapan.
Itekhnoloji yaseTshayina yobushushu obuphezulu be-superconducting magnetic levitation:
Umgaqo ngokusisiseko uyafana naleyo ye-superconductivity yobushushu obuphantsi, kodwa ubushushu bayo bokusebenza buyi-196°C.
Kuvavanyo lwangaphambili, oku kutsalwa kwemagnethi kwilizwe lethu akunakunqunyanyiswa kuphela kodwa kunqunyanyiswe.
△ Initrogen engamanzi kunye nee-superconductors △
Izinto eziluncedo kwi-High Temperature Superconducting Maglev Train
Ugcino lwamandla:I-Levitation kunye nesikhokelo ayifuni ulawulo olusebenzayo okanye unikezelo lwamandla esithuthi, kwaye inkqubo ilula. Ukunqunyanyiswa kunye nesikhokelo kufuneka kupholiswe kuphela ngenitrogen engamanzi exabiso eliphantsi (77 K), kunye nama-78% omoya yinitrogen.
Ukhuseleko lokusingqongileyo:I-high-temperature superconducting levitation magnetic ingaba yi-levitation statically, ngokupheleleyo ngaphandle kwengxolo; Umzila wemagnethi osisigxina uvelisa indawo yemagnethi emileyo, kunye nemagnethi kwindawo apho abakhweli bachukumisa inguziro, kwaye akukho lungcoliseko lwe-electromagnetic.
Isantya esiphezulu:Umphakamo welevitation (10 ~ 30 mm) unokuyilwa njengoko kufuneka, kwaye unokusetyenziselwa ukugijima ukusuka kwi-static ukuya kwi-low, medium, high speed kunye ne-ultra-high speed. Xa kuthelekiswa nobunye ubuchwephesha bemagnetic levitation, ifaneleke ngakumbi kuthutho lwemibhobho yofutha (ngaphezu kwe-1000 km/h).
Ukhuseleko:I-levitation force iyanda ngokukhawuleza ngokuncipha kokuphakama kwe-levitation, kwaye ukhuseleko lokusebenza lunokuqinisekiswa ngaphandle kokulawula kwicala elithe nkqo. Inkqubo yesikhokelo yokuzinzisa inokuqinisekisa ukusebenza ngokukhuselekileyo kwicala elithe tye.
Ukuthuthuzela:I-"pinning force" ekhethekileyo ye-high-temperature superconductor igcina umzimba wemoto uzinzile kwaye uphantsi, obunzima obunzima ukuba nayiphi na isithuthi siphumelele. Into abayifumanayo abakhweli xa bekhwele "yimvakalelo yokungabi namvakalelo".
Iindleko zokusebenza eziphantsi: Xa kuthelekiswa ne-German constant-conductivity magnetic levitation vehicles kunye ne-Japan low-temperature superconducting levitation vehicles usebenzisa i-helium engamanzi, ineenzuzo zobunzima obulula, ubume obulula, kunye neendleko eziphantsi zokwenziwa kunye nokusebenza.
Ukusetyenziswa kweNzululwazi kunye neTekhnoloji yeNitrogen yolwelo
Ngenxa yeempawu ze-superconductors, i-superconductor kufuneka ifakwe kwindawo ye-nitrogen engamanzi kwi--196 ℃ ngexesha lomsebenzi.
Ubushushu obuphezulu be-superconducting magnetic levitation yitekhnoloji esebenzisa iimpawu ze-magnetic flux pinning ze-high-temperature superconducting bulk materials ukuphumeza i-levitation ezinzileyo ngaphandle kolawulo olusebenzayo.
Ilori yokuZalisa iNitrojeni engamanzi
Iloli yokuzalisa i-nitrogen ye-liquid yimveliso eyilwe kwaye iphuhliswe nguSichuan Haishengjie Cryogenic Technology Co., Ltd. kwiprojekthi ye-high-speed maglev ye-high-speed maglev.Ingundoqo ye-maglev technology-Dewar yongezelela i-nitrogen engamanzi.
△ Ukusetyenziswa kweNdawo yeLori yokuZalisa iNitrojeni engamanzi △
Uyilo oluselfowuni, umsebenzi wokuzalisa initrogen elulwelo unokufumaneka ngokuthe ngqo ecaleni kukaloliwe.
Inkqubo yokuzaliswa kwe-nitrogen ye-semi-automatic liquid inokubonelela nge-6 dewars kunye ne-nitrogen engamanzi ngexesha elinye.
Indlela emithandathu yolawulo oluzimeleyo, izibuko lokuzalisa ngokutsha ngalinye linokulawulwa ngabanye.
Ukukhuselwa koxinzelelo oluphantsi, khusela ngaphakathi kweDewar ngexesha lokuzaliswa kwakhona.
24V ukhuseleko lombane wokhuseleko.
ITanki yokuNika ngokuZicinezelayo
It is a self-pressurized unikezelo itanki ephuhliswe ngokukodwa kwaye yenzelwe ulwelo nitrogen reserve. Ihlala isekelwe kwisakhiwo soyilo esikhuselekileyo, umgangatho obalaseleyo wokuvelisa kunye neentsuku zokugcinwa kwexesha elide le-nitrogen engamanzi.
△ Uthotho lweNitrojeni yoLwalo lweSongezo △
△ Ukusetyenziswa kwendawo yetanki yonikezelo ezicinezelayo △
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sisebenze neengcali ezivela kwiYunivesithi yaseJiaotong yaseMzantsi-ntshona
Kwenziwa umsebenzi wophando olulandelelweyo lweprojekthi ye-high-speed maglev yobushushu obuphezulu
△ Indawo yeSemina △
Siwonge ngokunzulu ngokuba nenxaxheba kulo msebenzi wobuvulindlela ngeli xesha. Kwixesha elizayo, siya kuqhubeka nokusebenzisana nomsebenzi wophando wokulandelela weprojekthi ukwenza onke amanyathelo anokwenzeka okuqhubela phambili kulo msebenzi wobuvulindlela.
Inzululwazi kunye neteknoloji yaseTshayina ngokuqinisekileyo iya kuphumelela
Ikamva laseTshayina lizele zizinto ezilindelekileyo